Puntland oo ka hadashay Eedeynta ah in ay raadsaneyso Rag siyaasiyin ah – SBC
Puntland oo ka hadashay Eedeynta ah in ay raadsaneyso Rag siyaasiyin ah
Posted by Webmaster on November 8, 2012 Comments
Dowlada Puntland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay Warar sheegaya in dowladu ay raadsaneyso shaqsiyaad siyaasiyiin ah islamarkaana dooneyso in ay xabsiga dhigto.
Taliyaha Ciidamada Police Puntland gen Maxamed Siciid Maxamed oo la hadlay Warbaahinta ayaa been abuur ku tilmaamay warkaas isaga ah isagoona sheegay in ciidamada Puntland ay amaanka sugayaan cidkasta oo amaan xumo wadana ay xabsiga dhigayaan.
“Arintaa wax ka jiraa ma jiraan, dad inta guryahoodii ciidanku tageen oo ay doon doonayaana ma jirto, laakiin cidkasta oo amaan dari ka sameysa Puntland waalaqabanayaa” ayaa ka mid ahaa hadalka Taliyaha ciidanka Police-ka Puntland
Marlaweydiiyay Taliyaha Hadaladaasi in ay ula jeedaan dad qaas ah ayuu kaga jawaabay in ka ciidan Police ahaan ay amaanka ilaalinayaan, cidkasta oo amaanka wax u dhimeysana aysan magacyo u kala laheyn xabsigana la dhigi doono.
Waxaa sidoo kale uu ka hadlay Taliyaha ciidanka Police-ka Puntland Nin ka tirsanaa xukuumadii hore ee Puntland oo ay ciidamada Police-ku xabsiga u taxaabeen inkastoo maanta la siidaayay.
Faarax C/laahi oo looyaqaan Faarax Gaab oo ah ninka ay ciidamada Police-ka Xabsiga u taxaabeen ayuu sheegay taliyuhu in loo xiray howlo falal amaan dari ah oo uu ka waday Magaalada boosaaso, hadase lagu sii daayay damaanad waa sida uu hadalka u dhiagye.
Sikastaba ha ahaatee Taliyaha Ciidamada Police-ka Puntland waxa uu dhaar ku maray in cid kasta oo amaanka Puntland wax u dhimeysa ay Xabsiga dhigi doonaan, waxaana hadalada taliyaha imaanayaan xili dadka gobolka ay isla dhexmarayaan in dowlada Puntland ay raadineyso rag siyaasyiin ah.
Waa in xabsiga la dhigaa kuwa qabiilka ku gabanaya oo amni darada ka wada mandhiqada puntland.
WIIL HAYLANEED says:
CIDWALBA OO AMNIGA KHALKHAL GALINAYSA HALA XIRO HANA LA TOOGNO DOWLADA AAN HADA HAYSONO WAA MID AAD U WANAAGSAN RUNTI WAA IN LALA SHAQEEYAA RUNTA FIICANE
AMNIGA PUNTLAND MAA MUQADAS CIDNA LOGA AABO YEELIMAAYO DOWLADA CIIDAN WANAAGSAN AYEY LEEDAHAY AMNI AYAAN KU JOOGNAA WAX INAGA MAQAN MA JIRAAN HORUMARKA YAAN LAGU CIYAARIN
waa sax in kaqabto cidkasta oo amaanka puntland khalkhal galinaysaa shacabkuna waa inay ciidamada lashqeeyaan
waa ku saxantahy dowladu inay xabsiga dhigto cid kasta oo khal-khal ku wada amniga ummada iyada oo aan loo egayn qabiil
walaal xukuumada waqtigeedii dhamaaday ee faroole isku dhejinayaa wiil iyo toban kale oo la xiraa wax ugu kordhimayane nafta wax kale oo lagu maaweeliyo hala raadsado.
reer xamar oo dooliga yiraahda ” hooyo dooliyaa isoo buruyey, koo kale aa inta marooya” waxaas maxaa ka dambeeyay “hebel hebelaa baroomiyay” iyo dishikaha inay ku seexdaan ” tana tii ookale weeye mujtamac reer pland na waxay dhaheen madharge dhurwaa ha cuno.
waa sax in xabsiga la dhigo dadka carqalada iyo amni xumada ka wada puntland si loo xaqiijiyo amaanka wadanka
sidoo kale qofkii ka horyimaada axsaabta waa in talaabo laga qaadaa sababtoo ah 66 shaqsi mar walba cid noo dooran mayaan sanadka uu haray madaxweyne farooole dadka dhaliishan waa inay samraan sababtoo ah dastuurka buu ku qoran yhy waana la ansixiyey sanadna ma badna waqtigan hadeer baad arkin isagoo dhamaaday.
puntland nabadeedu waa muqadis.
Faroole wuxu talada u dìbey wilkisa marka faroole wuxu kasameyey puntland sidi qadafe uga talinjirey seyf islam waxana u dameyn donta sidi ku dhacday wana arki dona thanks